Radio Fanambarana fm 98.4 Mhz - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
Araky ny efa nampahafantarina antsika teto dia efa mandeha amin’ny alalan’ny « web » ny radio fanambarana FM 98.4 Mhz amin’izao fotoana izao. Noho izany indrindra dia naverina ao amin’io onjam-peo io ny fampianarana Apokalypsy izay niarahana tamin’i pasitera Mailhol. Ny Alahady 01 Jolay 2012 lasa teo, tamin’ny 08 ora alina (ora eto Madagasikara) no nanomboka izay fampianarana izay. Satria efa mandeha maneran-tany ny Radio Fanambarana dia amin’ny fiteny malagasy sy frantsay ary anglisy no andehanany.
Isaky ny Alahady hatramin’ny Alakamisy, toy ny teo aloha ihany koa ny andro andehanan’ny fampianarana, saingy ny ora andehanany kosa no misy fiovana. Ny fampianarana amin’ny fiteny Malagasy dia mandeha isaky ny amin’ny 07 ora alina, miverina kosa izany amin’ny 04h30 maraina. Isaky ny amin’ny 08h30 alina dia ny fampianarana amin’ny fiteny frantsay no mandeha, miverina izany isaky ny amin’ny 09h30 maraina, ary amin’ny 04h30 ariva. Ho an’ny amin’ny fiteny anglisy kosa dia isaky ny amin’ny 10h30 alina no andrenesantsika izany, ary miverina kosa amin’ny 08h30 maraina sy amin’ny 02h00 folakandro.
Fandaharan’ny radio fanambarana
Nohon’ny fampianarana Apokalypsy izay entin’i pasitera Mailhol ao amin’ny radio fanambarana, dia nahitana fiovana avokoa ny ankamaroan’ireo fandaharana ao amin’ity onjam-peo ity. Misy araka izany ireo zana-pandaharana sasany no nafindra amin’ny fotoana hafa, ary ny sasany kosa nihena ny fotoana andehanany. Isan’ny nisongadina ihany koa anefa ny zana-pandaharana vaovao.
Nanomboka ny marainan’ny Alatsinainy 02 jolay 2012 dia nisy ny zana-pandaharana vaovao izay vokarin’ireo mpanentana fandaharana rehetra ao amin’ny radio fanambarana. “Fandresena vao maraina” no anaran’ity zana-pandaharana ity, ka ora iray sy sasany eo no faharetany. Ny alatsinainy hatramin’ny zoma, manomboka amin’ny 07h00 maraina no hanarahantsika izay zana-pandaharana izay. Ahitana lohahevitra maromaro ao anatin’izy ity, izay nokendrena manokana mba ho fanabeazana antsika mpihaino rehetra. Misy ihany koa anefa ny sehatra ahafahantsika maneho hevitra sy manome torohevitra, mahakasika izay lohahevitra atolotr’ireo mpiara-miasa ao anatin’ny zana-pandaharana. Inoana sy antenaina fa ho mpandresy hatrany isika miaraka amin’ny radio fanambarana fm 98.4 MHz.